BurmeseHearts – Page3– Online courses marketplace in Burmese language. Becomeastudent, becomeateacher, learn
Do you live in Myanmar and you need to get something done or you’re looking to makeadecent income?
mmFreelancer.com The freelance marketplace made for Myanmar. Hire experts freelancers for your job online. Do you live in Myanmar and you need to get something done or you’re looking to makeadecent income? Regardless in what kind of situation you are at the moment, mmFreelancer.com may be the solution you are looking for. mmFreelancer.com isafreelance marketplace that was particularly…
သူ့ဆီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရယူတာဟာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတခုလုံး သူ့လက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ကို နားလည်ဖို့ အခက်ဆုံးပဲလို့ အမျိုးသားအများစုကပြောကြတယ်။ တကယ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။…
ချစ်ခဲ့ဖူးကြတယ် ဒါပေမယ့် အခုမဟုတ်တော့ဘူး ကြင်နာခဲ့ဖူးတယ် ခုတော့ သူကြင်မှကိုယ်ကြင် ပျော်ခဲ့ဖူးကြတယ် ခု ...…
ဘဝမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲကိုပဲတွေ့တွေ့ ၊ ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပဲကြုံကြုံ အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသမျှ ပျော်ပျော် ၊…
သူ့အလုပ် ၊ ကိုယ့်အလုပ်ရယ်လို့ ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ကျင့်တွေဟာ ကောင်းသလား ။ မကောင်းဘူးလားနော်။ တချို့နေရာတွေမှာ …